Daawo: Baarlamaanka Soomaaliya oo Caydhiyey Shirkada DP World iyo Go’aanadii ugu adkaa oo laga qaatay | Arrimaha Bulshada
Home News Daawo: Baarlamaanka Soomaaliya oo Caydhiyey Shirkada DP World iyo Go’aanadii ugu adkaa oo laga qaatay
Daawo: Baarlamaanka Soomaaliya oo Caydhiyey Shirkada DP World iyo Go’aanadii ugu adkaa oo laga qaatay
Bulsha:- Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa goordhaw meel mariyay xeer dalka looga mamnuucayay Shirkada DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraatka , shirkadan ayaana ku xad gudubtay jiritaanka Qaranka Soomaaliya.
Kulanka Baarlamaanka Federaalka waxaa soo xaadiray 170-Xildhibaan waxaana xeerkan dalka looga mamnuucay Shirkada DP World ansixiyay 168-Xildhibaan , waxaana diiday hal xildhibaan, waxaa sidoo kale ka aamusay xal Xildhibaan oo kale.
Xeerkan dalka looga mamnuucay Shirkada DP World ayaa loogu magac daray ”Xeerka Dhowrida Gobonimada iyo Midnimada Gayyiga Soomaaliya ” waxa uuna xeerkan ka kooban yahay dhoor qodob oo xasaasi ah.
Sida ku cad xeerkan Shirkada DP World ayaa ku xad gudubtay Siyaasada ,Madax banaanida iyo jiritaanka Qaranka Soomaaliya, waxaana xeerkan Baarlamaanka meel mariyeen uu yahay mid gabi ahaan shirkadan dalka looga mamnuucayo.
Xeerkan ayaa cadeenaya in heshiis kasta oo caalami ah ay gali karto Xukuumada Federaalka Soomaaliya isla markaana lasoo marsiinayo heshiiskaasi Baarlamaanka si ay u meel mariyaan.
Xeerkan goordhaw meel mariyaan Baarlamaanka Fedrraalka Soomaaliya ayaa loo gudbin doonaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo si uu xeer Madaxweyne isna ugu meel mariyo.